5- Qodob oo soo dedejisay guuldarada madaxweyne farmaajo: – Kalfadhi
1- In uu ku dhiiraday muddo kororsi 2sano ah oo ay sii shaaciyeen mucaaradka ka hor intuusan la hor tegin baarlamaanka, aadna looga sii digay.
2- Doodda gobolka Gedo gaar ahaan kuraasta loo qoondeey Garbahaarey oo uu ku wayay labo maamul oo muhiim u ahaa.
3- Ku soo dhoweynta Cabdirashiid Jannan Muqdisho oo mucaaradka ku sugan Muqdisho siisay fariin kale oo khalifsan.
5- Shirkii afisiyooni oo uusan si niyad ah u wajhin ayada oo ay dunida dhowreyso natiijada.
6- Beesha caalamka oo uu dafiray doorkeeda dhismaha dowladnino ee Soomaaliya.
Farmaajo wuxuu haystay mucaarad uu siyaasad ahaan iyo shacbiyad ahaan uu ka adkaa, haddaba maxaa ayaga guusha siiyay?, waa 3 qodob:
1- Farmaajo oo madaxweyne DFS ah markii laga furfuri waayay gobolka Gedo oo uu kula dhagay Axmed Madoobe oo uu u aqoonsanaa isaga madaxweynaha DGJL ayay mucaaradkii Muqdishana siisay fursad ah in isaga madaxweynayaashii ka horeeyay kula dhagaan Muqdisho!!!.
2- Hadalkii Wasiir Beyle ee tariikhda galay ee ahaa ‘qasnadda dowladda waa sagxad oo shilin kuma jiro’ oo ahaa fariin dhiiro gelisay mucaaradka, isla markaana muujisay dowlad gabaabsi ah.
3- Dowladihii carabta ahaa ee gadaal ka taagnaa DFS oo shaxda badelay markii ay arkeen in farmaajo waayay badi taageerada labada reer ee ku hardama kursiga madaxweynaha Soomaaliya, kuwaas oo durba ka dhex shaxaya haatan gudaha mucaaradka iyo hareerihiisa.
Qaabka uu ku baxayo Farmaajo maxaa laga dhaxli doonaa?.
1- In aan la sugin madaxweyne Soomaaliyeed oo u hagar baxa ciidan soomaaliyeed, waayo mid kasta oo Villada yimaado waxa ugu horeeya uu ka digtoonaan doono waa ciidamada!!!!.
2- In aysan Mucaarad danbe wakhtigooda hadal ku lumin oo ay ficilka badin doonaan.
3- In aflagaada iyo dacaayadaha been abuurka ah ay siyaasadda Soomaaliya u noqon doonaan waxa lagu kala guulaysto, (Social Media)
4- In dowladaha deriska ah ku guulaysteen baabi’intii fikirkii naceybka ahaa ee ay Soomaalida dhulkooda iyo dadkoodu maqanyahay u hayeen ayaga.
Marwalba waxaa la isku raacsanyahay in 4tii sano ee la soo dhaafay ay Soomaaliya lahayd awood dowli ah oo ay wax ku diido waxna ku aqbasho, haddaba hankaas ma sii jirayaa?.
JAWAABTA IDINKA AYAA LEH!!!
W/Q Mahir Jama Adam
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyey geerida Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo ka tirsanaa Golaha Shacabka
Muqdishu oo lagu qabtay kulan lagu dhammeystirayo la tashiga Siyaasadda Diiwaangelinta Madaniga